केपी, प्रचण्ड भगवान हुन् ? – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
केपी, प्रचण्ड भगवान हुन् ?
– डिल्लीरमण सुवेदी
राम्रो काम गरे भगवान, नराम्रो काम गरे दानव । पूर्वीय दर्शनको मान्यता नै हो यो । प्राचीन कालमा जसले जनता, समाज र देशकालागि राम्रो काम गरे उनीहरु भगवानको रुपमा कहलिए । ध्वंश मच्चाउने, काटमार गर्ने, विपत्ति निम्त्याउनेहरुले दानवको पहिचान पाए । अहिलेको अवस्था र परिभाषा पनि त्यस्तै छ । नेपाली जनताले कहिले केपी ओलीलाई देवता बनाए भने कहिले दानव । यसैगरी प्रचण्डलाई पनि कहिले दानव त कहिले देवता ।
कात्तिक १० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दशैं, तिहार तथा छट पर्वको अवसरमा राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित वगैचामा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । मध्यान्न १२ बजेबाट सुरु हुने भनिएको चियापान कार्यक्रममा ११ बजेअघि देखिनै भिडभाड सुरु भयो । नेकपाका नेता, कार्यकर्तादेखि शुभचिन्तकसम्म, आसेपासेदेखि केरा, समोसा खासेसम्म भृकुटीमण्डपमा थुप्रिए । यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि अन्य नेतासम्म पनि त्यहाँ देखिए । कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारी तथा विदेशी नेतादेखि अन्य पार्टीका नेताहरुको पनि उपस्थिति त्यहाँ थियो । तर नेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने त्यहाँ उपस्थित थिएनन् । उनी विसन्चोका कारण अनुपस्थित रहेको बताइएको छ ।
चौरमा निर्माण गरिएको मञ्चमा निलो सोफामा शीर्ष नेतागणलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यो भन्दा अघि शुभचिन्तकहरुलाई दर्शन दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । भिड बढ्दै गएपछि स्वयम्सेवकले लाइनको व्यवस्थापन गरे । लाइन पुग्यो बगैचा, मुख्य गेट हुँदै फनपार्कको गेटसम्म । ठेलमठेल गर्दै र पसिना पुछ्दै धेरै शुभचिन्तकहरु लाइनमा बसे भित्र शीर्ष नेताहरुसँग हात मिलाउन पाइने, आफ्ना कुरा राख्न पाइने आशमा । त्यो आश नहुनेहरु लाइनमा नबसी बाहिरै टहलिरहे । कतिपय चै भित्र जाने मन हुँदा हुँदै पनि लाइन देखेर तर्सिएको पनि पाइयो ।
भित्र पस्ने शुभचिन्तकहरुले पनि परैबाट शीर्ष नेताहरुलाई जम्लाहात गरेर फर्किनु पर्ने भयो । त्यस बापत खाजामा एक कोसो केरा र समोसा । यत्रो समय खर्चिएर लाइन छिचोल्दै भित्र पुग्दा पनि शीर्ष नेताहरुसँग परैबाट दर्शन गर्नु पर्दा शुभचिन्तक निराश बने । हात समेत मिलाउन नपाएकोमा धेरैले गुनासै गरे ।
बाहिर लाइन देखेर तर्सिनेहरुले त यतिसम्म भन्न भ्याएकी के केपी ओली, प्रचण्ड देउता हुन् ? भगवान हुन् ? किन लाइन बसीबसी दर्शन गर्नु पर्ने ?
कार्यकर्ताहरुले शीर्ष नेतालाई देवत्वकरण गर्दै शुभचिन्तकलाई भेट भन्दा पनि दर्शनको लागि व्यवस्था गर्नु ठीक होइन । धेरैको मान्यता यही रहेको पाइयो ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको राष्ट्रियताको अडानले उनलाई नयाँ उचाई दिएको थियो । त्यसपछि नै हो तत्कालिन एमालेभित्र ओलीलाई राजनेता, जनताका नेता, राष्ट्रवादी नेता आदिले सम्बोधन गर्न थालिएको । जसको कारण पनि पछिल्लो चुनावमा एमाले देशकै ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो । तर त्यसपछि ओलीको राष्ट्रवाद हराउँदै गएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । पार्टी कार्यकर्ताहरुले ओलीलाई देवत्वकरण गरेर उनको साख गिराउने काम गरेको उनीहरुको बुझाइ छ जुन पटक पटक उनीहरुले मिडिया र सार्वजनिक सभामा बोल्दै पनि आएका छन् ।
यता २०५२ सालपछि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धताका प्रचण्ड ठूलै देवता थिए । क्रान्ति मार्फत जे पनि गर्न सक्ने, अदृश्य तथा भयङ्कर उनको रुप थियो । लाग्थ्यो उनी साँच्चै भगवान नै पो हुन् कि ? तर सरकारले आतंककारी घोषणा गरेर दानव बनाइदियो । भटाभट मान्छे मार्न थालेपछि उनी पनि दानव बन्न पुगे । पछि शान्तिवार्तामा आएर देशको प्रधानमन्त्री समेत बनेपछि भने उनी पनि देवताको दाँजोमा आए । उनलाई देवता मान्ने अहिले पनि नेकपामा धेरै नेता, कार्यकर्ता छन् ।
अहिले नेकपा देशकै ठूलो पार्टी बनेको छ । लगभग दुई तिहाइको सरकार चलाईरहेको छ । यो अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक रुपमा निक्कै शक्तिशाली व्यक्ति हुन् । उनीहरुले चाहेमा देशमा उथलपुथल ल्याउन सक्छन् । अर्थात् उनीहरु भगवान बन्न सक्ने अवस्था छ । तर उचित ढंगले काम गर्न नसके दानवको परिचय बनाउने पनि उत्तिनै सम्भावना छ ।
नेपाली जनता दुवै नेतालाई भगवान बनेको देख्न चाहन्छन् । देशमा आमूल परिवर्तन आएको हेर्न र भोग्न चाहन्छन् । दुई नेतालाई पुज्न चाहन्छन् । त्यो अवसर उनीहरुले जनतालाई प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यतिबेला उनीहरुलाई दर्शन गर्न होइन खुट्टा ढोग्न पनि जनता पछिपर्ने छैनन् । तर चियापानका नाममा नेताहरुले दर्शन दिने प्रचलन भने हटाउनु पर्छ ।
प्रकाशित मिति: 2018-10-27 2018-10-28 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged केपी ओली चियापान प्रचण्ड
प्रशंसा के. सी. बनिन् ‘वाई वाई ग्लोकल टिन हिरो–२०१८’
आजबाट श्रीस्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ
Tags: केपी ओली, चियापान, प्रचण्ड